बीभर, क्यानाडाको प्रतीक | Absolut यात्रा
दानियल | | क्यानाडा
को अनुसार क्यानाडा ऐन को राष्ट्रीय प्रतीक, कानून १ 1975 XNUMX मा जारी गरियो, यसलाई मान्यता दिइयो र घोषणा गरियो क्यास्टर (क्यास्टर क्यानाडेन्सिस) लाई मनपर्दछ को सार्वभौमिकताको प्रतीक कानाडा.
यो मैत्री कृन्तक, उत्तरी अमेरिकाको नदी र पोखरीमा बाँधहरूको अथक निर्माणकर्ता, यो देशको सबैभन्दा विशिष्ट प्रजाति हो। र सबैभन्दा प्रिय को एक। यो उनको कथा र क्यानाडा संग उनको विशेष सम्बन्ध हो:
El क्यास्टर क्यानाडेन्सिस को रूपमा पनि चिनिन्छ अमेरिकी बीभर। यूरोपियन बीभर प्रतिष्ठित छ (क्यास्टर फाइबर) यसको थोरै ठूलो आकार र यसको पुच्छरको आकारको कारण, जुन धेरै फराकिलो र चापलुसी छ।
यो अनुमान गरिएको छ कि उत्तर अमेरिकी भूमिहरूमा यी पशुहरूको लगभग १०-१-10 मिलियन छ। प्राय: बीचमा वितरित गरियो संयुक्त राज्य र क्यानडायद्यपि उत्तरको केहि भागहरूमा पनि मेक्सिको दशकौंसम्म मास्साको सिकार भए पनि (यसको फर उच्च मूल्यवान छ), यसलाई लोपोन्मुख प्रजाति मानिदैन।
1 क्यानाडाको इतिहासमा बीभर
2 ध्रुवीय भालु, क्यानाडाको नयाँ प्रतीक?
क्यानाडाको इतिहासमा बीभर
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन बीभर जनावरहरू मध्ये एक हो जससँग क्यानाडालीहरूले अधिक पहिचान गरे। वास्तवमा यो जनावर धेरैमा छ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति देशको र एक तरिकामा यो पनि भएको छ उनको कथाको नायक.
पहिले नै औपनिवेशिक समयमा, सत्रहौं शताब्दी देखि फर व्यापार (र ती बीचमा बियावरको) को पूंजी महत्त्व थियो क्यानाडाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास। फरसको खोजीमा भएको वाणिज्य अभियानहरूले विशाल अज्ञात क्षेत्रहरूको अन्वेषणलाई समर्थन गर्‍यो र असंख्य मानव बस्तीहरूलाई बढावा दियो।
कोमो किस्सा यस ऐतिहासिक समयावधिमा, यो याद गर्नुपर्दछ कि क्युबेकका विशपले क्याथोलिक चर्चको मद्दत अनुरोध गरे कि यो सम्भव छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्नका लागि। बीभरको मासु खानु लेन्टमा शुक्रवार भ्याटिकन चिकित्सकहरूले हो निर्णय गरे। यसको कारण यो थियो कि खाद्य कानून अनुसार, यस कृन्तक, जसले आफ्नो जीवनको अधिकांश भाग पानीमा खर्च गर्दछ, माछा मानीन्थ्यो।
बभर एक शताब्दी भन्दा बढी क्यानाडाई--प्रतिशत सिक्का को उल्टो मा चित्रित गरिएको छ
पछि, १ 1849 XNUMX in मा, बेभरहरूको प्रतिनिधित्वले पहिलो पटक यस देशको डाक टिकटहरू सजाए। आज पनि निकलमा उसको छवि देखिन्छ।
यसका प्रान्तहरूको आधिकारिक ढालमा बेभरहरू छन् मनिटोबा, अल्बर्टा y सस्केचेवान, साथै शहर मा टोरन्टो; यो पनि बियर हो देशको केही सैन्य निकायहरूको कि उस्को जस्तै क्यानेडाली सैन्य इन्जिनियरहरू र प्रतीक हडसनको बे कम्पनी। बीभर पनि लामो समयको लागि लोगोको लोगोमा देखा पर्‍यो ले क्यानाडियन, देश मा पहिलो अखबार को एक।
र हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि एक मैत्री बियरको नाम छ आमिक (एक शब्द जुन एल्गोनक्वियन भाषाको अर्थ बीभर हो) को रोजाइएको घरपालुवा जनावर थियो मोन्ट्रियल ओलम्पिक एन 1976।
यी सबै तर्कहरूको साथ, कसरी बेवास्ता गर्ने कि बेभर आफ्नै क्यानाडाको राष्ट्रिय जनावरमा छ? के सबैलाई स्पष्ट थियो अन्ततः 1975 मा आधिकारिक बनाइएको संग क्यानाडा ऐन को राष्ट्रीय प्रतीक पोष्टको सुरूमा उल्लेख गरिएको।
ध्रुवीय भालु, क्यानाडाको नयाँ प्रतीक?
यद्यपि बभर एक मात्र जनावर होइन जुन क्यानडाको प्रतिनिधि मान्न सकिन्छ। त्यहाँ अरू कोही छन् जसले त्यो सम्मानलाई विवाद गर्न खोज्छन्: केहि वन निवासीहरू मन पराउँछन् एल्क र गिलहरी, वा आर्टिक जीवहरूको जस्तो जनावरहरू बेलुगा व्हेल, the पफिन वा ध्रुवीय भालु।
ध्रुवीय भालु, बिभरलाई क्यानाडाको प्रतीकको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न उम्मेदवार
ती सबैमा, केवल ध्रुवीय भालु यो "क्यानाडाको पशु प्रतीक" को शीर्षक विवाद गर्न सक्षम भएको छ कि बभरले यति गर्वसाथ लिन्छ। यद्यपि उनीहरूलाई यो थाँहा छैन, दुबै क्यानाडालीहरूको मुटुमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
महान सेतो भालुहरू (जुन सिक्कामा पनि देखा पर्छन्, यस मामलामा $ २ सिक्का) देशभरि व्याप्त छ। तिनीहरू ल्याब्राडोर र न्यूफाउन्डल्याण्ड क्षेत्रहरू, मनिटोबा, क्युबेक, र ओन्टारियोको उत्तरी भागहरूमा बस्थे। यो ठीक त्यहाँ छ कि ध्रुवीय भालु प्रांतीय पार्क, हडसन खाडीको किनारमा र सडक द्वारा पूर्ण पहुँचयोग्य।
के ध्रुवीय भालु बीभरलाई क्यानाडाको प्रतीकात्मक जनावरको रूपमा विस्थापन गर्न सफल हुनेछ? केहि वर्ष पहिले, सिनेटले निकोल ईटन उनले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई ध्रुवीय भालुलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनको लागि मतदानको लागि उत्साहित अपील गरे। त्यसमा सन्तुष्ट छैन, उनीले ज्यादै बिभोरलाई अपमान गर्ने हिम्मत गर्छिन् "एक दन्त दोषपूर्ण मुसा"। बरु, उनले सेतो भालुको प्रशंसा गरे, श्रृंखलाबद्ध गुणहरू (शक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता र मर्यादा) द्वारा सम्पन्न कि यस सिनेटका अनुसार उनलाई क्यानाडाको पूर्ण प्रतीक हुन योग्य बनाउँदछ।
यसको दिनमा यस प्रस्तावलाई खारेज गरिएको थियो, यद्यपि त्यहाँ कन्ट्राइनको नयाँ प्रतीक सेता भालु (जनावर, बिउर जस्तो नभई लोप हुने खतरामा परेको छ) बनाउने प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको संख्या एकदमै महत्वपूर्ण छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » बीभर, क्यानडाको राष्ट्रिय जनावर
भारतमा शीर्ष बैंकहरू